Shirqoolka Suuriya Qaybtii Saddexaad…..
Tuesday August, 14 2018 - 14:35:32
Friday November 04, 2016 - 13:29:58 in by Hargeysa Office
Haddiiba aynu soo aragnay sida fudud ee loogu dhawaaqay inuu jihaad ka socdo wadanka Suuriya, islamarkaana loogu soo koobay keliya hub iyo maalka ayaynu kula shahiidaynaa walaalaheena ku dhimanaya madfaca iyo duqaynta diyaaradaha Nidaamka Bashar.
Waxa mudan, inaynu maanka ku hayno, in qollooyinkan jihaad doonka ahi ay badankooda gacan saar toosa iyo tu dadban ba ay la leeyihiin Maraykanka dhinacyada hubka iyo tababarada. Sidoo kale, Israel ma aanay qarsan taageerada ay u hayso qaar kamid ah maleeshiyaadka islaamiyiinta ah ee la dagaalamaya Nidaamka Bashaar, kuwaas oo ku daweeya dhaawaca maleeshiyaadka gudaha wadanka Israel.
Sawirkaas maxaa kaaga baxay???? …. Akhriste Jawaabta adaan kuu daayay
Haddaynu intaas ku soo koobno aragtida Carabta iyo barriga dhexe, aynu si kooban u sharaxno aragtida reer galbeedka eek u aadan dagaalka Suuriya.
Aragitda reer Galbeed ee Dagaalka Suuriya:
Reer galbeedku markii hore waxay taageersanaayeen in meesha laga saaro dawladan xooga leh ee gorgortanka ku haysa dawlad isu sheegta Israel ee xooga ku haysata dhulka falastiin. Balse nasiib darro waxaa kaga soo baxday in meesha uu soo galay Ruushka oo beryahanba la’a-a fursad uu ku muujiyo awoodiisa uu kula tartami karo dawladaha NATO ku bahoobay, isagoo xulafo la ah wadanka Shiinaha, Iran, iyo dawlada itaalka daran ee Suuriya.Taasi oo wax weyn ka bedeshay habkii dagaalka iyo awoodi dawlada Suuriya.
Dawlada Ruushka oo ah dawlad lagu yaqaan inay gumaad ba’an kana daran ka maraykanka iyo xulafadiisa u gaystaan dadka Muslimiinta ah ee xaq raadiska ah, Shiishaan (Chechnya) oo keliya wuxu ka gaystay xasuuq aanad malaysan Karin.
Sago ka gaystay xasuuq ba’an sida sawirada hoose ka muuqda.
Sidaa si lamid ah ayuu hadda xasuuq aanu waxba isula hadhin uga gaysanayaa dhulka suuriya, oo lagu xasuuqayaa shacab aan waxba gaysan caruur iyo dumar. Weerarada ugu daran wuxu ka gaystay ilaa hadda magaalada Xalab iyo Idlib.
aragti ahaan reer galbeedkugaar ahaan Maraykanka oo ahaa Diiga u taliya dunida 26 sanadood burburkii soviet ka kadib,waxay aad uga werwersan yihiin awooda ruushka ee sii tarmaysa marba marka ka dambaysa, taasi oo hadda uu muuqata in Maraykanka lagula tartamayo dhanka awooda, iyo dhaqaalaha ee qaaradaha Afrika iyo weliba Aasiya (Asia).
La soco qaybaha dambe......
W/Q: Cabdiraxman Mixile
06/08/2018 - 17:11:05
Caalamka:-Weerar Lagu Qaaday Dalka Suuriya Oo Sababay Dhimasho Iyo Dhaawaca +Cida Ka Danbaysay Weerarkaas.
Caalamka: Israa'iil oo soo ridday diyaarad dagaal oo Suuriya leedahay
25/07/2018 - 09:01:57